अमेरिकी सांसदलाई अर्थमन्त्रीले भने एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ «
अमेरिकी सांसदलाई अर्थमन्त्रीले भने एमसीसी संसदबाट पास हुन्छ
प्रकाशित मिति :4June, 2020 2:14 pm
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी सांसदहरुलाई एमसीसी संसदबाट छिट्टै पास हुने आश्वासन दिएका छन् । नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी कँग्रेसका सदस्यद्धय जर्ज होल्डिङ र अमी बेरालाई एमसीसी संसदबाट पास हुने आश्वासन दिएका हुन् ।
‘नेपालको विकासका लागि एमसीसी महत्वपूर्ण परियोजना हो, चाँडै संसदबाट पास हुनेमा हामी ढुक्क छौं’, अर्थमन्त्रीले भेटमा भनेका थिए । अर्थमन्त्रीले नेपाल अमेरिका बीचको सम्बन्ध धेरै पुरानो भएको स्मरण गर्दै अमेरिकाले नेपालको शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जस्ता क्षेत्रमा निरन्तर सहयोग गरेको स्मरण पनि गरेका थिए ।
अर्थमन्त्रीले नेपालका विकास प्राथमिकता, आर्थिक स्थिति र लगानीमैत्री वातावरणका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी पनि गराए । उनले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त गन्तव्य भएको उल्लेख गर्दै यहाँ उत्पादन भएका बस्तुको बजारका लागि समस्या नहुने पनि बताए । गतबर्ष भएको लगानी सम्मेलनमा अमेरिकी निजी क्षेत्रको उत्साजनक सहभागिता रहेकोमा पनि अर्थमन्त्रीले खुसी व्यक्त गरेका थिए ।
अमेरिकी कंग्रेसका सदस्यद्वयले नेपालको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको भूमिका, राष्ट्रिय प्राथमिकताका क्षेत्र तथा हितका पक्षमा सरकारले अघि सारेका विषयमा चासो व्यक्त गर्दै नेपालको विकासले अमेरिकाको निजी क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको बताएका थिए ।
एमसीसी के हो ? सन् २००४ मा स्थापना भएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) संयुक्त राज्य अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले निश्चित परिसूचकका आधारमा विश्वका विकासशील राष्ट्रहरूको छनोट गरी आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउँदै गरिबी हटाउन अनुदान सहायता प्रदान गर्ने उद्देश्य लिएको बताइने गरिएको छ।
हालसम्म ४९ देशमा एमसीसीको सहयोग छ। अल्बानिया, अरमेनिया, जर्जिया, जस्ता युरोपियन देशका साथै अफ्रिकी मुलुकहरुमा पनि यो कार्यक्रम लागू भइरहेको छ। ल्याटिन अमेरिकाको पेरु, ग्वाटेमाला, गुएनाका साथै एशियाका मंगोलिया, फिलिपिन्स, श्रीलंका, इण्डोनेसिया आदि देश पनि यसमा अनुबन्धित छन्। अमेरिकन सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) को चर्चा गर्नु पहिले इण्डो–प्यासिफिक रणनीति बुझ्न आवश्यक छ। इण्डो–प्यासिफिक (आइपिएस) लाई अमेरिकाले बेल्ट एण्ड रोड इनिसेटिभ (बिआरआइ) को प्रभावलाई रोक्न बनाइएको रणनीति हो ।
बिआरआई विश्व मानव हितका लागि चीनले जल, स्थल र हवाई तीनै ठाउँबाट मानव सम्बन्ध स्थापित गर्ने उदेश्यले बनाएको एक बृहत सञ्जाल हो। यो मानव जातिको भावनासँग सम्बन्धित रहेको छ। यही प्रायद्वीपको प्रभावलाई रोक्ने मनसायले २०१७ अमेरिकाल इण्डो–प्यासिफिक रणनीति विकसित गर्‍यो। यसैअनुसार एमसीसी र नेपाल सरकारबीच २०७४ भाद्र २९ गते ‘मिलेनियम च्यालेञ्ज कम्प्याक्ट’ सम्झौता सम्पन्न भएको हो। उक्त सम्झौतामा तात्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकी एमसीसी कार्यक्रमका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले हस्ताक्षर गरेका थिए।
उक्त सम्झौताबमोजिम अमेरिकी सरकारले ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने र नेपाल सरकारका तर्फबाट १३० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको रकम कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्नुपर्नेछ व्यवस्था छ। नेपालले उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका पूर्वाधारका क्षेत्रमा खर्च गर्नुपर्नेछ। जसमा सम्झौता लागू भएको मितिबाट ५ वर्षमा परिचालन गरी सक्नुपर्नेछ।